Ukuhlanganiswa komklamo - ukuzibophezela kwi-BIM ethuthukile ngama-Digital Twins - Geofumadas
Amawele wedijithali "i-Evergreen" andisa inani lomsebenzi wonjiniyela bezingqalasizinda kanye nokusebenzisa imodeli nokuvuleleka kwe-XNUMX kuyo yonke imijikelezo yokuphila yezimpahla
I-Bentley Systems, Incorporate, umhlinzeki womhlaba wonke wezinsiza eziphelele nezinsizakalo zamafu zamawele edijithali ukuqhubekisela phambili ukwakhiwa kwengqalasizinda, ukwakhiwa nokusebenza, namuhla umemezele izengezo nezibuyekezo ezinhlelweni zayo zokuvula imodeli nokulingisa ukuqhubekisela phambili ubunjiniyela kwamawele edijithali kuyo yonke imijikelezo yempilo yefa. Izicelo ezivulekile zeBentley zisekela ukuqhutshwa komsebenzi wedijithali osebenzisanayo, wokuziphindiselela, kanye nozenzakalelayo owenza imikhakha eminingi ephathelene nezingqalasizinda. Manje ngezinsizakalo ezintsha zamafu zamawele edijithali, inani lebhizinisi nokwazi kunwetshwa kuzo zonke izigaba zokwakha nokusebenza kwempahla yengqalasizinda.
"Ukwemukelwa okuningi kwe-BIM kusizakale kakhulu ochwepheshe kanye namaphrojekthi we-AEC eminyakeni eyishumi nanhlanu eyedlule, kepha manje, ngezinsizakalo zamafu, imodeli engokoqobo kanye nokuhlaziywa okuthuthukile, singathuthuka eBIM ngamawele ledijithali »U-Said Santanu Das, umongameli oyiphini eliphakeme kumdwebo wokuhlanganisa e-Bentley. "Kuze kube manje, ukusetshenziswa kwe-BIM kukhawulelwe ekulethweni okuyisimilo, okuthi, ngemuva kokulethwa ekwakhiweni, kuphelelwe yisikhathi ngokushesha, kulahlekelwe inani elingezelelweyo ledatha yobunjiniyela elikhiywe kumamodeli we-BIM. Manje, ngamawele ledijithali , singavula idatha yobunjiniyela ngemodeli ye-BIM enezici zayo zedijithali njengesiqalo, buyekeza ngokuqhubekayo umongo wedijithali ngokuqashelwa kwe-drone kanye nokulinganisa okungokoqobo - futhi kulapho lapho kuba mnandi khona impela -, qhubeka nokwenza imodeli futhi kulingise ukufaneleka kwempahla kukho konke ukulandelana kwezikhathi zedijithali komjikelezo wayo wempilo. Ekugcineni, inani ledatha yobunjiniyela kumodeli ye-BIM linganwetshwa ngaphandle kokudluliselwa ekwakheni nasekudluliseleni ekusebenzeni, liqinisekise futhi lithuthukise ukusebenza komklamo kanye nempahla. I-Advance BIM kuye ku-4D ngamawele wedijithali e-Evergreen isho ukuthi amamodeli wokuqamba kanye nokusetshenziswa kungasebenza ngezinhloso ezinkulu kunezidingo zephrojekthi, izofana ne-DNA yedijithali yempahla ephilayo!
Izinsizakalo ezintsha efwini le-Digital Twins for Design Integration
Ukunikezwa kokudizayina komklamo ka-900 manje kususelwa kuzinhlelo zokusebenza zedeskithophu kuya ezinsizakalweni zamafu, kunikeze izinhlangano amandla okwenza, ukubona ngeso lengqondo kwi-4D futhi kuhlaziye amawele edijithali ezimpahla zengqalasizinda. Izinsizakalo ze-ITwin zivumela abaphathi bemininingwane yedijithali ukuthi bafake idatha yobunjiniyela eyakhiwe ngamathuluzi ahlukahlukene wokuklama kumawele wedijithali bukhoma, engeza idatha ehlobene futhi ibavumelanise ne-real modelling, ngaphandle kokuphazamisa amathuluzi abo noma izinqubo zabo zamuva.
iTwin Design Ukubuyekezwa kusiza amaseshini wokubuyekezwa komklamo okusheshayo. Ivumela ochwepheshe ukuthi baqalise ukubuyekezwa komklamo we-ad hoc endaweni eyi-2D / 3D hybrid imvelo, kanye namaqembu weprojeki asebenza kumawele wedijithali ukwenza ukubuyekezwa komklamo kanye nokuxhumanisa ukwakheka kwezindlela eziningi. Inika ukuhamba komsebenzi:
(kochwepheshe) ukumaka nokubeka amazwana ngqo kuzinto zamamodeli we-3D futhi ushintshe phakathi kokubukwa kwe-2D ne-3D ngaphandle kokushiya imvelo ye-3D
(ngamaphrojekthi asebenzisa i-ProjectWise) ukubona ngeso lengqondo amawele edijithali ye-4D: thatha ushintsho lobunjiniyela emugqeni wesikhathi sephrojekthi futhi unikeze irekhodi elithembekile lokuthi ngubani owashintsha nini futhi nini
iTwin OpenPlant, le sevisi ihlinzeka abasebenzisi be-OpenPlant ngemvelo yomsebenzi osabalalisiwe kanye nezinkomba ze-bi-directional phakathi kwezethulo ku-2D kanye ne-3D zezingxenye zedijithali zesitshalo.
Vula izinhlelo zokusebenza zeModeli nezicelo ezivulekile ze-Simulation
Izakhi zokwabelana nokuxhuma ukugeleza kokusebenza kwedijithali phakathi kweziyalo ziyisisekelo semodeli evulekile yemodeli. Kuhlanganiswe nokwakhiwa kobunjiniyela kanye ne-BIM okususelwa kwiMicroStation ekhethekile yezinhlobo zezimpahla nezixazululo, imvelo evumelekile yokulinganisa ye-Bentley ikhuthaza ukusebenzisana, kusiza ukulungisa ukungqubuzana kanye nokukhiqizwa kokulethwa kwezinto ezinhlobonhlobo kusuka kunoma yisiphi isicelo.
Ukuthuthukiswa kokusetshenziswa kwaso endawenikazi ye-MicroStation kuqinisekisa ukusebenzisana, ukufinyelela imvelo yedatha exhunyiwe kanye nezinsizakalo zedijithali ezinjengeComputer Center yemitapo yolwazi eyabiwe kanye ne-GenerativeComponents yamakhono wokuklama okudala. Ngaphezu kwalokho, ukuhlaziya kanye nokulinganisa konjiniyela obuhlanganisiwe kuvumela abaklami ukuba basebenzise izilinganiso ezahlukahlukene ukufeza isisombululo esifanele kakhulu, hhayi ngokwakhiwa kokuqala kuphela, kodwa futhi nokungenelela okulandelayo nokwenziwa ngcono kwezimpahla zezingqalasizinda.
Vula Ukuvuselelwa Kokusetshenziswa Kwemodeli
(Okusha) I-OpenWindPower inikezela ukusebenzisana phakathi kwezicelo zokuklama nokuhlaziywa kwe-geotechnical, ukwakheka nokwakhiwa kwamapayipi, ukusebenzisa ukuhamba komsebenzi nokushintshaniswa kwemininingwane phakathi kwezindawo zokuziphatha, ukunciphisa ubungozi ekwakhiweni nasekusebenzeni kwamapulazi omoya asasele futhi asintantayo. I-OpenWindPower inika abasebenzisi imodeli ye-turbine yomoya ukuthi bakwazi ukuqinisekisa isimo sokuklama, benze ukuhlaziya, ukunciphisa izingozi kanye nokukhiqiza ulwazi ngokusebenza kwabo okulindelekile.
"I-OpenWindPower yehlisa umjikelezo wokuklanywa okuphelele futhi ixazulule ngempumelelo inkinga yemishaneli emiklamo emikhulu, inciphisa izindleko zokuthuthuka kwamandla olwandle," kusho uDkt Bin Wang, iphini likanjiniyela omkhulu weNew Research Institute Amandla, Ubunjiniyela bePOWERCHINA Huadong.
(New) I-OpenTower uhlelo lokusebenza olwenzelwe ngokukhethekile ukwakhiwa, imibhalo kanye nokwenziwa kwemibhoshongo emisha yokuxhumana, futhi nokuhlaziya okusheshayo kwemibhoshongo yezokuxhumana ekhona kubanikazi besakhiwo, abeluleki kanye nabasebenzayo abadinga ukuvuselela imishini njalo. Ukwethulwa kwe-OpenTower kuhlelwe ukukhishwa okulandelayo kwe-5G.
“Ngosizo lwezinhlelo zokusebenza zeWindows, ukwakhiwa kanye nokuhlaziywa kwemibhoshongo kulula, kushesha futhi kunokwethenjwa. Kubuye kunikeze amakhasimende ethu ukwaneliseka, ukuzethemba nokuthula kwengqondo, futhi kuthuthukisa ukuphepha komphakathi, ”kusho uFrederick L. Cruz, umongameli kanye ne-CEO yeFL Cruz Engineering Consulting.
Umakhi wesiteshi se-OpenBuildings manje kufaka i-LEGION futhi kuthuthukisa ikhwalithi yomklamo ngokwenza kahle ukwakheka kokusebenza kwesikhala sesiteshi sokwakha kanye nemizila yokuhamba yohamba ngezinyawo.
Umklami we-OpenSite Manje ifaka amakhono okuhlala, isekela ukuqanjwa nokuklanywa kwezindawo zokuhlala, ukuhlukaniswa kweziza, kanye nokwakhiwa kwezakhiwo zangokwezifiso.
Isiklami se-OpenBridge manje ihlanganisa i-OpenBridge Modeler nokuhlaziya nezimpawu zokuklama ze-LEAP Bridge Concrete, i-LEAP Bridge Insimbi ne-RM Bridge Advanced.
I-OpenRoads SignCAD Ukuvuselelwa kwe-OpenRoads ukwenza i-3D modelling yezimpawu ngaphakathi kwemiklamo emisha noma ekhona.
Vula izibuyekezo zesicelo sekulingisa
(Okusha) Abakwa-900 Systems bamemezele ukutholwa kwamaCitilabs, ukuvumela ukubonwa kwawo kwethrafikhi yeCUBE kutholakale ngokuzwakalayo ku-OpenRoads.
Izicelo ze-geotechnical PLAXIS ne-SoilVision zivumela onjiniyela ukuthi benze izindlela eziningi zokuhlaziya, kungakhathalekile ukuthi yizici zokuhlawula noma ukulingana okulinganiselwe. Ukusebenzisana okusha nge-RAM, i-STAAD ne-OpenGound kuthuthukisa ikhwalithi yezixazululo eziphelele ze-geostructural zokwakheka okuhlangene nokuhlaziywa kwenhlabathi, amadwala nezinhlaka ezihambisanayo.
Ukubambisana kwedijithali kweDizayini Yokuhlanganisa
(Nge-Nokia) i-900 OpenRoads izosebenzisa inzuzo I-Aimsun kusuka kwa-Nokia ukuqondiswa kwethrafikhi esezingeni eliphansi.
(Nge-Nokia) Umklami wezindiza olandelayo we-OpenRail uhlanganisa i-OpenRail Designer ne-Nokia SICAT Master.
(Nge-Nokia) I-OpenRail-Entegro Train Simulator ihlanganisa i-Nokia Entegro ne-othomathikhi yokulawula isitimela sekulingisa neBextley ContextCapture, i-OpenRail ConceptStation, i-OpenRail Designer neLumenRT, ukusebenza ne-Digital Twins.
Thumela Previous«Langaphambilini Izindaba ze-Geo-Engineering - Unyaka Engqalasizinda - YII2019
Post Next «EthicalGEO» - isidingo sokubuyekeza ubungozi bokuthambekela kwendawoOkulandelayo »